We She Me: သားရဲ့အီအီး
May Moe - 8/17/08, 12:07 AM
သားသားလေး ရဲ့ အီအီး ကိုသေချာဖတ်ပြီး မှတ်သားစရာရှိတာ များကိုသေချာမှတ်သွားပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ :)
nu-san - 8/17/08, 1:21 AM
Andy ရေ.. သားလေး မျက်မှောင်ကြုံပြီး အီးအီး ညစ်နေပုံလေး မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်လာတယ်.. သားလေးက သမီးထက်စာရင် ပိုပြီး သိနေသလိုပဲနော်။ ရီတာ ပြုံးတာလေးတွေက ပိုထူးတယ်။ :)
သမီးလေးကတော့ ကြီးလာလေ ယောင်္ကျားလေးနဲ့ ပိုပိုတူလာတယ်။ ဆံပင်ကလည်း ထောင်၊ ဘောင်းဘီသာ ၀တ်ပေးထားလို့ကတော့ တကယ့် ယောင်္ကျားလေးပဲ။
ဇနိ - 8/17/08, 1:53 AM
မှတ်သားတာတော့ စံပဲ ကိုအန်ဒီ.. ချီးကျူးပါတယ်။
Anonymous - 8/17/08, 4:19 AM
ခလေးအီးက အစ အတော်အနုစိတ်ကြည့်ပါလား။ ဗဟုသုတရပါ့ဗျာ။
မြရွက်ဝေ - 8/17/08, 5:44 PM
ဟိုက်ရှားဘား!! ကလေးဆိုတာ အီအီးကအစ အဲလိုကြည့်နေရတာလား။ မသိဘူး မကြားဘူးတာတွေ မှတ်သားနာယူသွားပါတယ်။ :)
Andy Myint - 8/17/08, 10:44 PM
အီအီးတွေကို မှတ်သွားလား.... ညီမမေမိုး ;)
သားလေးက အခုကတည်းက Social ရနေပြီး မနုစံ။ ဟုတ်ပ သမီးပုံကတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ။
ကိုဇနိလည်း မှတ်ထားဦး.. တစ်နေ့ ကျုံးရမယ် အဟီး
ဟုတ်တယ် မမြရွက်ဝေ။ ကလေးတွေက အဲဒီလို အကုန် စောင့်ကြည့်နိုင်မှ တော်ကာကျတာလေ။
sawphonelu - 8/18/08, 1:48 AM
ကျွန်တော့်သမီးတုန်း က ဆို ရင် သူ့ အမေ က ထမင်း စား တုန်း တခြား လူ က သန့် ရှင်းရေး လုပ် ပေး ရင် တောင် “ဟဲ့ ပြ ပါ ဦး” လို့ ပြောပြီး ကြည့် ရ တယ် လို့ သူ က ပြန် ပြော ဘူး တယ် ။
pandora - 8/18/08, 10:31 PM
ဟိုခေတ်ကလူကြီးတွေ ပြောကြတာတော့ ကလေးတယောက်မွေးရင် အဖေအမေဗိုက်ထဲကို ကြက်ဥတစ်လုံးစာလောက် ၀င်သွားတယ် ဆိုပဲ။
sandar - 8/19/08, 5:51 AM
ဟုတ်တယ်နော် မိဘဖြစ်လာရင်တော့ ဒီလိုပါပဲ၊ နေ့တိုင်း အီးကြည့်ရတယ်။ အီးမကောင်းရင် စိတ်ပူရ၊
မပါရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါလွန်းပြန်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပူရတယ်။
ကျွန်မ သမီးတုန်းကတော့ wipe တွေသုံးရင်cream လိမ်းနေတဲ့ကြားထဲက rash ဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဘေဇင်မှာသွားပြီး ရေနဲ့ ဆေးချရတယ်။
ရွှေပန်းလေး အုပ်တဲ့ဟာ store တွေမှာရောင်းတာတွေ့ဖူးတယ်။ ဆပ်ပြာခွက် အဖုံးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်။
Andy Myint - 8/19/08, 7:53 PM
မဟုတ်ဘူး မပန်ရေ။ ဟားဟား အခုခေတ်မှာတော့ ငုံးဥလုံးလောက်တော့ ၀င်ချင် ၀င်သွားမယ် ထင်တယ်။ ဝေါ့... အော့... အူး... :)
ဟုတ်လား မစန္ဒာ။ မတွေ့ဖူးဘူး။ တွေ့ရင်တော့ ၀ယ်ထား ရမယ်။ ဟုတ်တယ်.. ပါလွန်းလည်း စိုးရိမ်ရ။ မပါလွန်းလည်း စိုးရိမ်ရပါပဲ။
တန်ခူး - 8/21/08, 1:12 PM
ကိုအန်ဒီရေ ကျွန်မသားအီးအီးလဲ အမေနို့ တိုက်တုန်းက အဲဒီအရောင်ပဲ… အတွေ့ အကြုံလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရတော့ ကြည်နူးစရာ….
Andy Myint - 8/22/08, 9:37 AM
အခုလို သိရတာ ၀မ်းသာတယ် မတန်ခူး။ ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့ သားလေးဟာ ပုံမှန်ပဲဆိုတာ သိရလို့ပါ။